Cusboonaysiinta Htc geesiga ah ayaa la heli karaa | Androidsis
U cusbooneysii geesi HTC HELI HALKAN
antocara | | HTC, Noticias, ROM
Laga soo bilaabo bogga rasmiga ah ee Htc Spain cusbooneysiinta boosteejooyinka ayaa hadda la soo dejin karaa Halyeey Htc ka socota hawlwadeenka Orange bilaash ah Iyadoo cusbooneysiintan la rom 2.73.405.5 isdhexgalka ayaa la sii hagaajiyay Dareenka Htc sidaas darteedna loo hagaajiyo khibrada isticmaalaha. Intaa waxaa dheer, waa suurtagal in la hagaajiyo diiradda kamaradda ku rakiban telefoonka.
Rakibaadda waxaa lagula talinayaa inaad si taxaddar leh u akhrido tilmaamaha ku taxan Halkan. Kaliya waxaad ka cusbooneysiin kartaa kumbuyuutar Windows XP Sp2 ama Windows Vista lagu rakibay, waana inaad sidoo kale rakibtay Nidaamka HTC kumbuyuutarka. Adoo ku xiraya taleefanka kombiyuutarka isla markaana marka uu garto, waxaan fulinaa romka aan horey u soo dejinay waana inaan sugnaa inta rakibidiisu dhamaanayso iyo wax kale. Ka taxaddar in lagaa qaado batteriga iyo in la joojiyo habka PC-ga ee hibernate.
Fiidiyowga waxaan ku arki karnaa terminaalka geesiga ah ee Htc cusbooneysiinta horey loogu rakibay.
LA cusbooneysiiyay: Romka ka muuqda bogga rasmiga ah ee Htc waxaa loogu talagalay boosteejooyin bilaash ah. Hawlwadeenka Orange waa inuu bilaabaa cusbooneysiinta nafteeda
Cusboonaysii 20/09/09: Hadda waxaa laga heli karaa kala soo bax bogga internetka ee Htc UK soo degso Halyeey Htc by Orange ka yimid wadankaas. Halyeeyada Htc Orange ee Spain Ayaa dhacaya.
Cusboonaysiinta 01/10/09: Hadda waxaa loo heli karaa Htc Hero Orange ee Spain, fiiri Halkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » HTC » U cusbooneysii geesi HTC HELI HALKAN
Hagaag, iima oggolaaneyso inaan soo dejiyo romerka .. markaan dhigayo nambarka taxanaha ah wuxuu ii sheegayaa:
Waan ka xunnahay, laakiin softiweerka aad rabto inaad soo dejiso looma heli karo nooca qalabkaaga.
iyo haa, waxaan hayaa HTC Hero xD
Luis Gil dijo
Anigana sidoo kale, aniga sidoo kale waxaan heystaa Geesi Orange ah. : PP
Ku jawaab Luis Gil
Mid kale oo taas la mid ah, u fiirso in maalintiisii ​​uu ii oggolaaday inaan iska diiwaangeliyo websaydhka HTC my Hero lambarkiisa taxan, laakiin hadda igama oggola inaan soo dejiyo.
Aynu eegno haddii qof u naxariis badan yahay inuu ku laalo ROM-ka meel si aan u soo degsanno oo u cusbooneysiino.
Ku jawaab imolinos
Ma ogtahay haddii uu tirtiro sawirradaada, xiriiradaada iyo / ama muusiggaaga?
Ku jawaab josep
Jawaab gaaban: HAA
Jawaab dheer: waxa cusbooneysiintu sameyneyso ayaa qaabeysa Halyeeygaaga ka dibna rakibi Android-ka cusub. Aynu u ekaano sida markii aad qaabeyneyso PC-ga si aad u rakibto Windows / Linux cusub
Marka qof ma awooday inuu soo dejiyo? Oo
Halkaas ayay ku qoran tahay in dhammaan dookha hawlwadeenadeena laga tirtirayo waxyaabo kale. Ma hubtaa in cusboonaysiinta Orange ay caadi tahay? Miyay ku dhigaysaa meel bogga rasmiga ah?
Ma jiraa qof qabtay oo markhaatigiisa ma bixin karaan? Sideen u keydin karaa dhamaan xiriirada iyo xogta kale ee la tirtirayo.
ROM-ka bogga rasmiga ah waxaa loogu talagalay Halyeeyo bilaash ah.
Anigu mawduucu si aad ah iima saarin laakiin waxaan suuqa ka helay codsi aan ku guuriyo xiriirada ku jira banaanka. Raadi contact2sim oo lacag la'aan ah oo shaqeynaya.
Waxaan ula jeeday "nuqul xiriiriyaha 'sim', Halyeeygeygu wali ma uusan aqoon magaca kaarka.
Hubsaday, waxaan kala soo degay romerka nambarka taxanaha ah oo ka socda terminal bilaash ah waxaanan ku rakibay halyey ka socda Orange, laakiin waxyar uun ka dib markii aan bilaabay rakibaadda ayaa la joojinayaa oo kuu sheegayaa inaan la qaban karin
Marka waa inaan sugnaa sugitaanka nooca liinta: S
Ku jawaab Xhaz
Cusboonaysiinta UK Oange ayaa hadda laga heli karaa bogga Htc UK. Isbaanishka way ku dhacaysaa
Hagaag, wakhti ayey qaadanayaan, maya ... dharkan liimiga ah ayaa taga! Isbaanishka had iyo jeer kuwa ugu dambeeya .. asko
Ku jawaab ury
laakiin dadka liinta leh wax ma ka yiraahdaan? waxaad dhahdaa goormuu soo baxayaa? Waxaan galab badh ku qaatay ladagaalanka adeega macaamiisha isbadalna qofna fikrad xun maleh, xitaa ma oga in ay tahay Android oo waxbadan cusbooneysiin yar! waa waalan tahay!
Tani waa waxa shirkadahaani leeyihiin. Movistar wuxuu riyadiisa u cusbooneysiiyay koob keega maalmo yar ka hor iyadoo aan loo eegin sida aad u codsatay, waxba kuu sheegi maayaan. Haddii aan ku jiri lahaa CMT dhammaantood way ogaan lahaayeen.
Waxaan hayaa ORANGE HTC HERO oo si fiican ayey u shaqeysay. Waxaan rakibay qalabka cusub:
ROM U cusbooneysiinta HTC Hero (Orange) _2.73.61.5
waxa ku jira shabakadda htc wax walbana waxay ku dhammaadeen si qumman.
DHIBAATADA ayaa ah inaan hadda barnaamijyo kula soo dagsan karin Suuqa Android.
Markii aan galo Suuqa Android, wuxuu ku sugaa «Shuruudaha Adeegga Suuqa ee Android. Loading ... »oo waligaa halkaas ugama tago.
Ma taqaanaa habka lagu xaliyo? ma jirtaa waddo dib loogu noqdo ROM-kii hore ama mid cusub oo tan hagaajiya?
Ku jawaab Irwyn
Irwyn, isla waxbaa igu dhaca aniga. ma xalisay?
Ugu jawaab max
waad salaaman tihiin dhamaantiin, waxaan hayaa geesiga htc ee oranjiga oo laga sii daayay IMEI, waan soo dejiyaa cusbooneysiinta wax walbana waa hagaagsan yihiin laakiin markaan isku dayo inaan feylka ku furo daaqadaha taleefanka ayaa iga jaraya. mahadsanid salaan
waad salaaman tihiin dhamaantiin, waxaan hayaa geesiga htc ee oranjiga oo laga sii daayay IMEI, waxaan soo dejiyaa cusbooneysiinta wax walbana waa hagaagsan yihiin laakiin markaan isku dayo inaan feylka ku furo daaqadaha taleefanka ayaa iga jaraya. mahadsanid salaan. Aan aragno haddii qof i caawin karo
XAFLAD FURAN, CIYAARTA 3D EE ANDROID